सलमान ऐश्वर्या: फ्लाश ब्याक स्टोरी – MEDIA DARPAN
सलमान ऐश्वर्या: फ्लाश ब्याक स्टोरी
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २४ आश्विन २०७५, बुधबार १४:५९
बलिउड अभिनेता सलमान खानले तत्कालिन प्रेमिका ऐश्वर्या रायलाई हातपात गरेको प्रसंग पुरानो हो । तर, अहिले ‘मि टु’ अभियानले भारतमा उग्ररुप लिइरहँदा यो प्रसंग फेरि चर्चामा आएको छ । कतिपयले सलमान र ऐश्वर्याका पुराना अन्तरवार्ताहरु पनि सेयर गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए यो प्रकरणलाई फेरि किन फर्केर नहेर्ने त ? ऐश्वर्याले सार्वजनिकरुपमै स्वीकारेकी छिन् सलमानले आफूमाथि हातपात गरेको कुरा । यो उनीहरु अफेयरमा रहँदाको घटना हो । ऐश्वर्याले एक अन्तरवार्तामा भनेकी छन्, ‘उनले मलाई अन्य सहकर्मी कलाकारहरुसँग नजिकिएको भनेर शारीरिक र मानसिक आक्रमण गर्थे । भाग्यवश, मेरो शरीरमा कुनै चोटपटक लागेन । त्यसैले म केही नभएजस्तो गरी बसेँ ।’
सलमानको टर्चर सहन नसकेर आफूले प्रेम सम्वन्ध तोडेको ऐश्वर्याले बताएकी छन् । तर, त्यसपछि पनि दुख दिन नछोडेको उनी बताउँछिन् । ‘मैले कल रिसिभ नगर्दा उनी आफैंलाई चिथोर्थे,’ ऐश्वर्याले भनेकी छन् ।
तर, सलमान यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको एउटा भिडियोमा उनले दिएको जवाफ रोचक छ ।
के तपाईंले कुनै महिलालाई हातपात गर्नुभएको छ ? भनी पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा सलमान भन्छन्, ‘हो, एउटी महिला (ऐश्वर्यालाई ईंगित गर्दैं) ले यस्तो आरोप लगाएकी छिन् । यदि साँच्चै मैले हात हालेको भए सायद उनी जिवित रहने थिइनन् । मेरो मड्की कति बलियो त दुनियालाई थाहा छ ।’
ऐश्वर्या सलमानलाई छोडेर विवेक ओबरायसँग सम्वन्ध गाँस्न पुगेकी थिइन् । तर, उनले बिहे भने अभिषेक बच्चनसँग गरिन् । यता सलमान चाहिँ अहिलेसम्म अविवाहित नै छन् । ऐश्वर्यापछि उनले थुप्रै प्रेमिका फेरिसकेका छन् । अहिले उनको सम्वन्ध रोमानियाकी मोडल लुलिया वन्तुरसँग छ ।
कुन देशको पासपोर्ट कति शक्तिशाली
दसैं आयो: खसी किन्ने तरिका जानी राखौं है
२८ माघ, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को आयोजनामा अहिले राष्ट्रिय महिला लिग भइरहेको छ । तीन विभागीय टोली र…
श्रृङखलाबद्ध राजनीतिक कार्यक्रम : लामो दूरीका सवारीलाई राहत, छोटो…
पोखरा महानगर : महाशाखा खोज्न महाभारत, एकीकृत सेवा कार्यालय कागजमा…
श्रृङखलाबद्ध राजनीतिक कार्यक्रम : लामो दूरीका सवारीलाई राहत,…
पोखरा महानगर : महाशाखा खोज्न महाभारत, एकीकृत सेवा कार्यालय…